वैशाखमा बढ्ने अनुमान गरिएको घरजग्गा कारोबार उल्टै ४०% घट्यो, सस्तोमा किन्नेले पनि बेच्न सकेनन् ! | आर्थिक अभियान
जेठ ३, काठमाडौं । गत वर्ष मंसिर/पुसमा घरजग्गा कारोबार घटिरहेका बेला व्यवसायीहरू भन्थे;'फागुन/चैतभित्र तरलता समस्या समाधान हुन्छ । वैशाखदेखि घरजग्गाको कारोबार पुरानै लयमा आउँछ ।'
तर वैशाखको घरजग्गा कारोबार भने व्यवसायीले सोच्दै नसोचेको जस्तो भयो । नयाँ वर्ष २०७९ को पहिलो महिनामै घरजग्गा कारोबारमा ठूलो धक्का लागेको छ ।
गत वर्ष फागुन र चैतमसम्म पनि मासिक ७० हजार हारहारी घरजग्गा किनबेच भइरहेकोमा वैशाखमा भने जम्मा ४४ हजार घरजग्गा मात्रै किनबेच भएका छन् । जुन चैतको भन्दा २६ हजार अर्थात झन्डै ४० प्रतिशत कम हो ।
धेरै कारोबार हुने ठाउँमै पनि वैशाखमा आधा मात्रै कारोबार भएको छ । ४ देखि ५ हजार घरजग्गा किनबेच हुने इटहरीमा वैशाखमा २ हजार घरजग्गा मात्रै किनबेच भएका छन् ।
३ हजार देखि ३५ सय सम्म घरजग्गा किनबेच हुने झापामा वैशाखमा १७ सय घरजग्गा मात्रै किनबेच भएका छन् । २५ सय देखि ३ हजार सम्म घरजग्गा किनबेच हुने वेलवारी मोरङमा पनि वैशाखमा १८ सय घरजग्गा मात्रै किनबेच भए ।
२२ सय देखि २५ सय घरजग्गा किनबेच हुने जनकपुरमा पनि वैशाखमा १५ सय घरजग्गा मात्रै किनबेच भए । २ हजार भन्दा बढी घरजग्गा किनबेच हुने उपत्यकाका भक्तपुर ललितपुर लगायतका मालपोत कार्यालयमा वैशाखमा १३/१४ सय घरजग्गा मात्रै किनबेच भएका छन् ।
उपत्यकामा डिल्लीबजार बाहेक सबैजसो मालपोत कार्यालयले एक हजार देखि २५ सय सम्म घरजग्गा किनबेच गराउने गरेकोमा वैशाखमा ललतिपुर भक्तपुर र कलंकीले मात्रै १ हजार भन्दा बढी घरजग्गा किनबेच गराएका छन् ।
नेपालगञ्ज, चितवन र मकवानपुर बाहेकका कुनै पनि मालपोत कार्यालयमा १ हजार भन्दा बढी घरजग्गा किनबेच हुन सकेनन् ।
घरजग्गाको कारोबार घटेसँगै चैतमा साढे तीन अर्ब रुपैयाँ उठेको रजिष्ट्रेशन दस्तुर वैशाखमा साढे २ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
किन घट्यो कारोबार ?
घरजग्गा व्यवसायीका अनुसार घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको करीब ६ महीना भन्दा बढी नै भइसकेको छ । माघ, फागुन र चैतमा बढेको घरजग्गा कारोबार भनेको समस्यामा परेका केही व्यक्तिले सट्टापट्टा गरेको वा केही कम मूल्यमै बेचेका कारण कारोबार बढी देखिएको हो ।
अहिले भने समस्यामा परेका व्यक्तिबाट सस्तो मूल्यमा जग्गा किनेका व्यवसायीलेसमेत जग्गा बेच्न सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा घरजग्गाको कारोबार निकै नै कम भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
फागुन र चैतमा त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै घरजग्गा लिलामीमा राखेर सकारेका कारण पनि कारोबार बढी देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
चैतसम्म तरलतता समस्या समाधान हुने र वैशाखपछि घरजग्गा कारोबार बढ्ने् अपेक्षा गरेका व्यवसायीहरू अब भने कम्तिमा आगामी असोजपछि मात्रै कारोबार बढ्ने बताउँछन् ।